ဂျီတော့ နှစ်ခုဖွင့်ချင်လို့ (proxy နှစ်မျို&#4 — MYSTERY ZILLION
ဂျီတော့ နှစ်ခုဖွင့်ချင်လို့ (proxy နှစ်မျို&#4
အခုတလော . ..ဂျီတော့မှာ voice ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ် . . . .ဂျီတော့ပွင့်တာတော့မြန်ပါတယ် . .စကားပြောလို့မရတော့ အသံလေးတွေကြားချင်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်မပြေပါဘူး . ..
အဲ့ဒီအတွက် freedom ဆော့၀ဲလေးနဲ့ သုံးရင် voice ပြောလို့ရသွားပါပီ . .. .ဒါပေသိ freedom က တစ်ခါတစ်လေ တံခါးပိတ်သွားတော့ ဂျီတော့သုံးနေရင် ပျက်သွားတော့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြန်ရော . . .
အဲ့ဒါကြောင့် . . . ဂျီတော့ နှစ်ခုဖွင့်လို့ရရင်တော့ . . .တစ်ခုကိုပုံမှန်အတိုင်းသုံးမယ် . .နောက်တစ်ခုကို ကျော်ပီးသုံးမယ် . .ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပဲ လို့တွေးမိလို့ပါ . . .စကားပြောဖို့မလိုတဲ့သူက ပုံမှန်နဲ့သုံးတော့ ၀င်တာလည်း မြန်သွားမယ် . .
နည်းလမ်းလေးများရှိမလားလို့ ပါ . . . :77:
အဲ့ဒါကြောင့် . . . ဂျီတော့ နှစ်ခုဖွင့်လို့ရရင်တော့ . . .တစ်ခုကိုပုံမှန်အတိုင်းသုံးမယ်  . .နောက်တစ်ခုကို ကျော်ပီးသုံးမယ် .
ဒီလိုလုပ်ပါ .. Gtalk Icon ကို R-click လုပ်ပြီး..properties ကိုသွားပြီး အဲဒီမှာ Target ဆိုတဲ့ box ရဲ့နောက်ဆုံး startmenu ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ nomutex လို့ပြောင်းရိုက်ပြီး Apply , Ok လုပ်ပြီးရင် .. ကြိုက်သလောက်ဖွင့်လို့ရပါပြီ..Taskbar tray ထဲမှာ ဘယ်နှစ်ခုလဲဆိုတာပေါ်နေပါလိ့မ့် မယ်.. ပုံမှာ ပြထားပါတယ်..
စက်တလုံးတည်းမှာ gtalk တခုထက်ပိုပြီးသုံးနိုင်ပါတယ် ။ (6 ခုအထိဘဲသုံးဖူးသေးတယ်)
Desktop ပေါ်က gtalk icon ကို Right click နှိပ်ပြီး Properties ကိုဖွင့်Shortcut Button ကို Select လုပ်
Target ကွက်လပ်မှာ s\_Google\_Google Talk\_googletalk.exe" /nomutex ဒီအတိုင်းဖြည် ့လိုက်ရင် gtalk ကြိုက်သလောက်ဖွင် ့နိုင်ပါပြီ ။
Settings ကို Click နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့Menu List အောက်က Connection ကိုထပ် Click ပြီး gtalk တိုင်းအတွက် ကြိုက်တဲ့Proxy ကို ထည် သုံး့နိုင်ပါတယ် ။ (2ခုမက ထဲ ့နိုင်ပါသည် )
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..အခုတလော MPT မှာရော. Wi-Max မှာရော.. voice ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်. ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာတော့ freedom သုံးဖို့ရာ. MpT ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်.. ၀ုိင်မက်စ်ကတော့ လုံး၀ အဆင်မပြေပါဘူး.. Wi-Max တွေ က ရန်ကုန်မှာတော်တော်ကောင်းတယ် ကြားပါတယ်. မန္တလေးမှာတော့ တော်တော် ကို ဆိုးနေပါတယ်.. လိုင်းချင်းအတူတူ ဘာလို့..ဒီမှာကြတော့ မကောင်းတာလဲ ခင်ဗျ....သိရင်ပြောကြအုံးနော်... MPT ကတော့..ဟိုအရင်က တော်တော် ဆိုးပါတယ်..အခု No proxy ပြောင်းသွားပြီးကတည်းက..တော်တော် ကောင်းနေပါတယ်...... ....၀ုိင်မက်စ်ရေ..ဘာကြောင့် မကောင်းတာလဲ..နော.်.........:P
:77::77::77: မိုးကောင်းကင် :77::77::77:
Mr Moe Zatt Ko ,
ဘယ်သူမှ မဖြေသေးဖူးဆိုပြီး ၀င်ဖြေပေးတာ Submit Reply ကို နှိပ်လိုက်တိုင်း Internal Server Error ဆိုပြီးပေါ်ပေါ်လာနေလို့အကြာကြီးစောင် ့နေရတယ် ။
တင်လို ့ရသွားတော့Mr Moe ရဲ့Post ကိုတွေ ့ရတယ် ။
တမင် လုပြီးဖြေတာမဟုတ်ဖူးနော် ။
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..အခုတလော MPT မှာရော. Wi-Max မှာရော.. voice ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်. ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာတော့ freedom သုံးဖို့ရာ. MpT ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်.. ၀ုိင်မက်စ်ကတော့ လုံး၀ အဆင်မပြေပါဘူး.. Wi-Max တွေ က ရန်ကုန်မှာတော်တော်ကောင်းတယ် ကြားပါတယ်။
ဟမ်...Wi-max တွေ ကောင်းတယ်ဟုတ်ရား..
ဘယ်နားက ကြားတာလဲ ဟင်...ပြေးသုံးချင်လို ့ပါ:D:D:D
ရပါတယ်..ဒေါက်တာနို့(အဲလေ)Dr.Knowရယ်:D..ဘယ်သူဖြေဖြေ..ဘာဖြစ်တုန်း .. မေးတဲ့သူကအများကြီးဖြေပေးထားလို့ပိုတောင်ပျော်သွားဦးမယ်..:D:D..Dr.Know ပြောပုံက ကျွန်တော့် Connection က Broband Fiber Optical လိုလို 1Gbps ရထားသလိုလိုဖြစ်နေပြီ... ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့လဲဒီလိုဘဲသူလိုငါလိုပါဘဲဗျာ .. :D.. တောက်.. ပြောရင်းဆိုရင်း အဖေ့သားကြီးစိတ်ကောက်လာပြီ:D:D
အယ်...... အဲဒါတော့ ဘယ်နားလဲသိ၀ူးဗျ... ရန်ကုန်က အွန်လိုင်းမှာ ရှိတဲ့..သူငယ်ချင်းတွေ က ပြောတာ...သူတို့ဆီမှာ ကောင်းတယ်တဲ့. ပြီးတော့ ဟိုနေ့က..ရန်ကုန်က ညီတစ်ယောက်လာတော့..မန္တလေး က ၀ုိင်မက်စ် ဆိုင်တွေကို လှည့် သုံးကြည့်ပြီးတော့.. ကွန်မကောငး်ဘူးတဲ့.. ရန်ကုန်မှာ ကတော့ ၀ုိင်မက်စ် ဆိုင်တွေက ကွန်လည်း ..ကောင်းတယ် လို့ ပြောသွားတယ်.... အဲဒါကြောင့်ပါ...
မကောင်းတာကတော့ wimax ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဖင်မနိုင်ပဲ ပဲကြီးဟင်း စားမိလို့ပါ။ဆိုးတာကတော့ REDLINK ကြောင့်ပါ။ကျနော် သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ..အဟမ်း..
redlink ဟာ သူ့ရဲ့ wimax အတွက် ပုဂံ မှာ server ထိုင်ပါတယ်။အဲဒီ အတွက် ပုဂံကို ပိုက်ပိုက််ပေးရတယ်ပေါ့ဗျာ။ အားလုံး ပုဂံ ကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ခိုင်းရပါတယ်။အဲဒီတော့ ဗျာ wimax ဟာ ပုဂံ၇ဲ့ မွေးစားသားပေါ့။ broadband , bagan adsl တို့ ဆိုတာ တွေကျတော့ ပုဂံရဲ့ သားအရင်းလေ ။ အဲဒီမှာ စတာပဲ။ ဂရုစိုက်စရာရှိရင် သားအရင်းကို အရင်ဂရုစိုက်မှာပေါ့။ ပြီးမှ မွေးစားသား ဆီ လာမှာလေ။ မန္တလေး redlink ရုံးကလဲ အရောင်းသက်သက်ပါ။ error တခုခု ဆို ရန်ကုန် ရုံးကို ပြောရပါတယ်။ ရန်ကုန်ရုံးကနေမှ ပုဂံ ကို ပြောရပါတယ်။ရန်ကုန်ရုံးကလဲ အရောင်းပါပဲ။ဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံး ပုဂံ ကို ပိုက်ပိုက်နဲ့ ပြန်ခိုင်းတာပါ။ ဒီမှာတင် တော်တော်ကြာသွားပါပြီ။ သူတို့ဟာသူတို့ လဲ တခါတလေ ဘာဖြစ်မှန်းတောင် မသိကြပါဘူး ။ wimax အတွက် server ကလဲ ရန်ကုန်မှာ ပဲထိုင်ထားတယ်လို့ သိရတယ်။ မန္တလေး မှာ မရှိပါဘူး ။ ကျတော်ပြောချင်တာက ၀ယ်စရာရှိရင် ISP ကနေပဲ တိုက်ရိုက် ၀ယ်တာကောင်းပါတယ်။ ပြောစရာ ရှိရင်လဲ တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရတာပေါ့။ နို့မို့ ဘယ်သူက မှားနေလဲ ကိုယ်မသိရဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ရတနာပုံ ကနေပဲ အားလုံးကိုကိုင်ပြီး local ISP တွေ ချပေးမယ်လို့သိရတယ်။ အဲဒါလဲ ရတနာပုံ ကတိုက်ရိုက်၀ယ်လို့ရရင် တိုက်ရိုက်ပဲ ၀ယ်ကြပါ။ နေ့လည်လူမလာလို့ ကိုယ်တလုံးတည်း တိုက်ရိုက်သုံးပါတယ်(အခုနော်) ။gtalk ကို ၅ မိနစ်လောက်မှ၀င်သွားတယ်။ အဲဒါမှတော့ ဗျာ dialup ပဲ သုံးတော့မှာပေါ့။ dialup ကတောင် တခါတလေ မြန်သေးတယ်။ ကျတော်ဆို dialup ခေတ်ကတည်းက သုံးခဲ့တာပါ။ dialup ကိုမနက် ၅ နာရီလောက်ထသုံးတာ wimax 512 နေ့လည်ထက် အများကြီးသါတယ်။ နေ့လည်လဲ သိပ်မကွာဘူး။:D 128 ဆို google တောင် တက်ပါ့မလား မသိဘူး:D။(ဆိုင်ဖွင့်မယ် ဆိုပြီး wimax 512 ၀ယ်လိုက်တာ၊ အိမ်မှာပဲ ဖုန်းကရှိပြီး ဖွင့်မဲ့နေရာမှာ ဖုန်းမရှိလို့ ၊ဖုန်းက မြို့နယ်မတူလို့ ရွှေ.မရဘူး ) ဘာဖြစ်လို့များ လုုိင်းတွေ တခုနဲ့ တခု မတူကြတာပါလိမ့် ???? ရန်ကုန် ကတော့ ကျတော်လဲ ကြားတာ ကောင်းတယ်တဲ့ ။ ဘယ်မြို့နယ် ကလဲတော့ မသိဘူးနော်။
ဒီလို ရင်ဖွင့်ရုံပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပဲရှိတော့ ဒါပဲ သုံးနေရပါတယ်။:106:ဟူး.........ရှူး........
ဟူး= သက်ပြင်းချ သံ
ရှူး= စိတ်လေ၊ စိတ်ပျက် သံ
အဲ့ဂလိုလုပ်တော့ . . .အဆင်တော့ပြေတယ် . .ဒါပေသိ . .အဆင်တော့မပြေပြန်ဘူး . . .
အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို freedom နဲ့ကျော်လို့ရပီးတော့ အသံပြောလို့ရသွားတယ် . . .အဆင်မပြေဘူးဆိုတာက . .proxy တစ်ခုပြောင်းလိုက်ရင် . .နောက်ထပ်ဖွင့်တဲ့ gtalk မှာလည်း ပြောင်းလိုက်တဲ့proxy ဖြစ်သွားရော . ..
ကျွန်တော်လိုချင်တာက . .. ပုံသေပြောင်းထားမယ်ဗျာ . . ဂျီတော့တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရင်ပုံမှန် proxy နဲ့တစ်ခု . . .နောက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရင် ကျော်ပီးသား proxy နဲ့တစ်ခု အဲ့ဂလို ရချင်တယ် . .ဖြစ်နိုင်မလားဟင်. . .
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့ဆီမှာ deepfreeze တင်ထားတော့ တစ်ခါပြောင်းပီးသွားရင် restart ချပီးတိုင်းပြန်ပြောင်းနေရလို့ပါ . . .
gtalk portable လေးနဲ့ရမလားလို့ သုံးကြည့်သေးတယ် . .မရဘူး
ဒီမှာတော့ရတယ် ။ လုပ်ပုံ လုပ်နည်းလေးလည်း လွဲမယ်မထင်ဖူး ။
1. ပထမ gtalk ကို ဖွင် ့ပြီး ကြိုက်တဲ့Proxy တခုနဲ့Sign in ၀င်လိုက်ပါ ။
2. ဒုတိယ gtalk ကို ဖွင် ့ပြီး ကြိုက်တဲ့Proxy Or No Proxy ထားပြီး၀င်ပါ ။
ဒီမှာတော့အဲ ့ဒီလို လုပ်တာနှစ်မျိုးလုံး ၀င်လို ့၇တယ် ။
# ပထမတခုကို Sign in အရင်၀င်ဖို ့မမေ ့နဲ့။
ကျွန်တော်ပြောတာ ဒီလိုဗျ ဒေါက်တာနုန်း ခင်ဗျ . . . . .
ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံက . . .ဒီတစ်ခါ ရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်နော် . . .:D
ကျွန်တော်က တစ်ခါတည်းပြောင်းထားချင်တာ . . .ဥပမာ . .gtalk 1, gtalk2ဆိုပီး ဒက်စတော့မှာ ရှော့ကတ် တင်ထားလိုက်မယ်ဗျာ . . .gtalk 1 ဆိုရိုးရိုး၊ gtalk2ဆိုရှယ်ပေါ့(proxy ချိန်းပီးသား) လေးပေါ့ . .မဂွတ်ဘူးလား . .:39:
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့ဆိုင်မှာ တစ်ယောက်လာသုံးတိုင်း လိုက်ချိန်းပေးနေရလို့ပါ . . .:77:
မောင် ... (ခေါ်ရတာ နစ်နာ..သလိုပဲ...:P) ပြောသလိုတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ထင်ပါတယ်.ခင်ဗျ.. ကျွန်တော် လည်း စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ..gtalk shortcut နှစ်ခုထား..လဲ..နှစ်ခု စလုံးက.. နောက်ဆုံး ၀င်ခဲ့တဲ့..proxy နဲ့ပဲ ..ပြန်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်....အကိုပြောသလို..လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့.. gtalk setting မှာ..Detect proxy automatically ကိုထား ပေးထားပါ.. ပထမ..၀င်တဲ့..gtalk က. ရိုးရိုး gtalk ပေါ့ ဗျာ.. အဲးဒီ gtalk ၀င်သွားပြီဆိုမှ.. freedom..တိုက freegate တို့..ဖွင့်လိုက်ပေါ့ဗျာ..အဲဒါ ဆို..နောက် gtalk ထပ် ၀င်လိုက်ပါ... နောက်၀င်တဲ့..gtalk ကတော့.. သူပြောသလို.. ရှယ်..ပေါ့..ဗျာ.... အဲ.. အရင် gtalk က ကျသွားသလားတော့ မသိဘူးနော.်..proxy က auto.. change.သွားလို့လေ...စမ်းကြည့်လိုက်ပေ့ါဗျာ... ရမရတော့ ပြန်ပြောပေါ့...ဟဲဟဲ..............
:2:ကျွန်တော်လည်း နည်းလမ်းရှာလိုက်အုန်းမယ်. . .:39:အဆင်ပြေရင် ပြန်ပြောပါ့မယ်. . .